Maker အမှတ်တံဆိပ်သည်စည်အောက်တွင်လူမှုရေးရှိသည်။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 21, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 မာတီ Thompson က
ငါမကြာသေးမီကမှာ post ကိုကျော်ဖတ်ပါ ဖောက်သည်များ၏ဘုရားကျောင်းat the hoopla over the Jackie Huba နှင့် Ben McConnell (ဤလုပ်ငန်းတွင်အထူးချွန်ဆုံးသောလူနှစ် ဦး မှ) ကရေးသားခဲ့သည်။ Maker ရဲ့ Mark။ Maker's Mark သည်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ထုတ်ကုန်များ၏ Beam ကိုမိသားစု.
Raidious မှာ Dodge Lile မှာငါတို့သူငယ်ချင်းတောင်မှအချို့သောထူးဆန်းသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူ chimed ။ Maker's Mark သည်သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုဆက်လက်သိုလှောင်ထားသောစာရင်းများကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့် ၀ ယ်လိုအားကိုတိုးမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပုံရသည်။ Maker ရဲ့ Mark တံဆိပ်ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကနေတစ်ဆင့်မျှဝေခြင်းကြောင့်ခံစားခဲ့ရသည့်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများက Rob သို့မဟုတ် Bill Samuels ဖြစ်လျှင်ငါသည်နောက်ကျရင် bourbon ပိုမိုသောက်လိမ့်မည်ဟုပြောခြင်းသာဖြစ်သည်။
ငါဖတ်ခဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်အများစုအားဖြင့်, Maker ရဲ့ Mark လူမှုကလပ် ယခုသူသည်ကယ်တင်ရှင်၊ ဖြောင့်မတ်သောလမ်းပြညွှန်ကြားသူ၊ သို့မဟုတ်မရည်ရွယ်ဘဲမကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်လမ်းကြောင်းများအဖြစ်ပုံဖော်ထားသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်နောက်ထပ်မှတ်ချက်များ, လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်။ Maker's Mark သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များရှိသည်ကိုသေချာစွာသိရှိပြီးဖြစ်သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်.
Beam ရှိကုန်ပစ္စည်းအစုစုအတွင်းရှိထုတ်ကုန်များစွာသည်ဖော်မြူလာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စစ်ဆေးမှုများကိုသေချာပေါက်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Laphroaig ကော။ အာ့ဒို Courvoisier? ဤအရာများသည် Beam တံဆိပ်များလည်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကာလ၏စမ်းသပ်မှုကိုခံနေရသောထုတ်ကုန်များနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းထက်ရှုပ်ထွေး။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ သို့သော်စောင့်ဆိုင်း, စျေးကွက်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီထုတ်ကုန်ပြောင်းလဲမှုများသတိထားမိပါသလား စားသုံးသူကိုအကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသလား။ ကျွန်တော်သံသယဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော့်အချက်ကဒီ သင့်တွင်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပြီးသည်နှင့်သင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး အနေနှင့်မြင့်မြတ်သည်ဟုနီးနီးကပ်ကပ်နားလည်သဘောပေါက်သည်နှင့်သင်သည်စားသုံးသူထံမှမည်သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုမှမရှိဘဲသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သလား။ ကုန်ပစ္စည်းအများစုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှုဆောင်များနှင့်အလုပ်သမားပျားများ၏တပ်များသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်များ၊ ကုမ္ပဏီအသစ်များသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်များမကြာမီတွင်သစ္စာစောင့်သိလိမ့်မည်။ ဤတွင်ဤမျှလောက်များစွာသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်သူတို့လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြု။ ချဉ်းကပ်ပုံကိုပျက်ကွက်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။
သူတို့ကအဖြစ်လူမှုမီဒီယာကြည့်ရှုပါ အခြားလိုင်းတစ်ခုပဲ, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူနီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့စေ့စပ်အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းမရှိဘဲ။ တွစ်တာနှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တစ်ခုတည်းမှတဆင့်ဤသို့မပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ ရေရှည်တည်တံ့။ အသုံးဝင်သောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ သေချာတာပေါ့၊ ဒီလူမှုရေးပလက်ဖောင်းတွေကိုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ခိုင်လုံတဲ့ပေါ်တယ်၊ တည်ဆောက်မယ့် virtual အုပ်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်အသုံးပြုဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဒါကလူစုလူဝေးလုပ်ခြင်းနှင့်အတူတူလား? ဝေးပါသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်လူအုပ်ထဲတွင်မည်သူနှင့်မည်သည့်အရောင်များကို ၀ တ်ဆင်သည်ကိုမသိပါ။
Bourbon အကြပ်အတည်းသည် ၂၁ ရာစုတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏အရေးပါသောအသစ်သောအချက်တစ်ချက်ကိုလည်းထောက်ပြသည်။ ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ခန်းမများမှထွက်ပေါ်လာသောစျေးကွက်သည်စျေးကွက်ထဲတွင်မရှိပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည်ဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်နီးကပ်စွာပါ ၀ င်ရမည်။ ၎င်းသည်တစ်ချိန်ကရှိခဲ့သည့်အတားအဆီးများသည်ယခုနှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့်လူမှုရေးနှင့်မည်သို့အသုံးချသင့်သည်ဟူသောအမှန်တကယ်ကတိဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျဤအားထုတ်မှုနောက်ကွယ်မှမောင်းသူအဖြစ်လူမှုရေးအရာခပ်သိမ်းကိုမကြည့်သင့်ပါ။ ပြီးတော့မဟုတ်ရင်လုပ်ဖို့ဆိုတာလူမှုစီးပွားဘ ၀ ရဲ့နယ်ပယ်မှာအလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့ပါ။ Maker ၏ Mark သည်စာသားအတိုင်းထောင့်သို့အတင်းအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းခံရပြီး Beam စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို၎င်းတို့၏စျေးကွက်စည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်ပုံရသည်။
ကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် "အရက်သေစာနှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသာဖော်ပြပါ။ အမှတ်တံဆိပ်၏အပြုသဘောဆောင်သည့်အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အရက်၏ခွန်အားကိုအလေးအနက်မထားပါနှင့်။ " Beam Marketing Code ကို.
သင်၏ပြakerနာများအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်လူမှုရေးနယ်ပယ်ကိုအားမကိုးမှီသင်သည် Maker's Mark ဖြစ်စေအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါစေအချိန်ကိုယူပြီးနောက်ကွယ်ရှိကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ။ တာဝန်သိစွာသောက်ပါ။
Tags: ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမှတ်တံဆိပ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိုင်းအဝိုင်းJim beamထုတ်လုပ်သူအမှတ်အသားလူမှုမီဒီယာ
22:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 41
သူတို့ဘာကြောင့်အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကအစကတည်းကမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့အခါငါဇနီးကိုရယ်ပြီး "ဟုတ်တယ်၊ သိပ်မကောင်းဘူး။ " နှင့်ကြည့် .. ကမပေး။
22:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 59